Izinkinga nezixazululo - iLongou International Business (Shanghai) Co., Ltd.
Izinkinga ezijwayelekile ekwakhiweni kwe-wall putty nezixazululo
Ama-bubbles akhiqizwa ngesikhathi senqubo yokwakha nangemva kwesikhathi esithile, ingaphezulu lamagwebu e-putty.
① Isisekelo simbi futhi isivinini sokukhuhla sishesha kakhulu;
Layer Isendlalelo se-putty sincane kakhulu ekwakhiweni kokuqala, ngaphezulu kwe-2.0mm;
Okuqukethwe kwamanzi kwesendlalelo sesisekelo kuphakeme kakhulu, futhi ukuminyana kukhulu kakhulu noma kuncane kakhulu. Ngenxa yokuthi iqukethe i-void eningi futhi i-putty inokuqukethwe okuphezulu komswakama, ayiphefumuleki, futhi nomoya uboshwe emgodini ongenalutho, okungelula ukuwuqeda;
Ngemuva kwesikhathi sokwakha, kuqhuma namabhamuza ebusweni, ikakhulu okubangelwa ukuxubana okungalingani. I-slurry iqukethe izinhlayiya ze-powdery eziphuze kakhulu ukuba zingancibilika. Ngemuva kokwakhiwa, kudonswa inani elikhulu lamanzi bese liyavuvukala lenze ukuqhuma.
① Uma kuvela indawo enamanzi amaningi, sebenzisa i-spatula ukuchoboza ngqo amabhamuza amancane, bese usebenzisa i-putty efanelekile ukuklwebha ungqimba olungaphezulu lwe-foam;
Generally Ngokuvamile uPutty uxubeke ngokulinganayo, bese eyeka imizuzu engaba yishumi, bese usebenzisa isixubanisi sikagesi ukusixuba futhi bese usibeka odongeni;
FUma kukhona ukushwabana ebusweni besibili noma bokugcina bokwakhiwa, i-spatula kufanele isetshenziselwe ukususa igwebu ngaphambi kokuba i-watermark isuswe ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho blistist eyenzeka ebusweni be-putty;
④Ngamadonga anokhahlo ikakhulukazi, ngokuvamile khetha i-putty ejiyile njengokwesisekelo;
TheEmvelweni lapho udonga lome kakhulu noma umoya unamandla nokukhanya kunamandla, okokuqala ukumanzisa udonga ngamanzi ahlanzekile ngangokunokwenzeka, futhi ngemuva kokuba udonga lungenawo amanzi, susa ungqimba lwe-putty.
Ngemuva kokuthi ukwakhiwa kuqediwe futhi komile, impuphu izowa lapho ithintwa ngesandla.
Isikhathi sokupholisha sangaphakathi se-wall putty powder asilawulwa kahle, futhi indawo yomisiwe bese ipholishwa izofakwa impuphu;
PowderEngaphandle kwe-putty powder, ukumbozwa kuncane, lapho kushisa kakhulu ehlobo, amanzi ayahwamuka ngokushesha, futhi ungqimba olungaphezulu alunamanzi anele okulapha, ngakho-ke kulula ukukhipha impuphu;
ProductUmkhiqizo udlula impilo yeshalofu, futhi amandla okubopha ancipha;
ProductUmkhiqizo ugcinwa ngokungafanele, futhi amandla okunamathela ehla kakhulu ngemuva kokumunca umswakama;
Izinga lokumuncwa kwamanzi eliphezulu lesendlalelo lesisekelo lidala ukuthi i-putty yome masinyane, futhi abukho umswakama obanele bokulapha.
Amandla wesibopho phakathi kwe-putty ne-base layer awampofu, futhi iwa ngqo kusuka kusendlalelo sesisekelo.
① Udonga oludala lubushelelezi kakhulu (njenge-putty enomoya omnene, i-polyurethane nolunye upende oyisisekelo kawoyela), kanti i-putty powder ayinamathele kahle ebusweni;
② Udonga olusha lufakwa ngesifanekiso, ubuso bushelelezi futhi buqukethe inani elikhulu le-ejenti yokukhipha (uwoyela wenjini kadoti noma abicah);
③ Okwezingqimba zokhuni, izinsimbi zensimbi nezinye izinto ezingezona ezomdaka (njengepulangwe, i-plywood emihlanu, ibhodi lezinhlayiya, ukhuni oluqinile, njll.), I-putty isuswe ngqo, ngenxa yokwanda okuhlukile kwendawo kanye nemikhawulo yokuncipha, nemikhiqizo enjalo ube nokufakwa kwamanzi okuqinile nokuqina kwangaphakathi odongeni putty akukwazi ukukhubazeka kanye nakho, ngokuvamile kuzowa ngemuva kwezinyanga ezintathu;
④ I-putty idlula impilo yeshalofu futhi amandla okubopha ancipha.
① Susa isendlalelo sokuxebuka bese ubhekana naso ngokuya ngezimo ezilandelayo;
② Pholisha udonga oludala ukukhulisa ubukhali bendawo, bese usebenzisa i-ejenti yesibonisi (i-10% yokuvikela imvelo noma i-interface ekhethekile);
③ Sebenzisa i-ejenti yokuhlanza i-degreasing ukususa i-ejenti yokukhipha noma ezinye izakhi zamafutha ngaphezulu, bese usebenzisa i-putty;
④ Sebenzisa izingxenye ezimbili noma okhethekile weplywood putty ekwakheni;
Use Sicela usebenzise i-putty entsha ekhethekile yodonga olungaphandle lwemabula, i-mosaic, i-ceramic tile nezinye izindonga zangaphandle. Sebenzisa ngaphakathi kwempilo yeshalofu le-putty.
Phakathi kwezingqimba ezimbili ze-putty noma phakathi kwe-putty ne-substrate kuyaxobana.
① Susa isendlalelo sokuxebula bese ukhetha kabusha i-putty ekhethekile ukuze usule;
② Ezingxenyeni zokwakha ezi-chalkwe kakhulu, kungcono ukusebenzisa u-10% wokufaka uphawu lokuthambisa ukuvala uphawu, futhi ngemuva kokomisa, yenza ungqimba lwe-putty oluhambisanayo noma okunye ukwakhiwa;
③ I-Putty, ikakhulukazi i-putty yangaphakathi yodonga, yenza mfushane isikhawu phakathi kwezakhiwo ezimbili ze-putty ngangokunokwenzeka;
Attention Naka ukuvikelwa ngesikhathi senqubo yokwakha. Ngesikhathi kwakhiwa i-putty noma kungakapheli amahora ayisishiyagalombili ngemuva kokwakhiwa, i-putty akufanele ingene emanzini.
Ngemuva kokufaka i-putty isikhashana, indawo yaqhekeka.
① I-putty ebikade iqhekekile idinga ukususwa. Uma ukuqhekeka kungekhulu kakhulu, i-putty eguquguqukayo nayo ingasetshenziselwa ukwakhiwa kokuqala, bese kuthi ukwakhiwa kwenziwe ngokwendlela ejwayelekile yokwakha;
Construction Ukwakhiwa ngakunye akumele kube kukhulu kakhulu. Isikhathi esikhethiwe phakathi kwalezi zakhiwo ezimbili kufanele sibe ngaphezu kwamahora ama-4. Ngemuva kokuthi i-front putty isome ngokuphelele, ukwenziwa emuva kuyenziwa.
① Ukwakha ngaphambi kokuthi isisekelo somile ngokuphelele, futhi ukwakhiwa kudinga ukuthi umswakama wesisekelo ungaphansi kuka-10%;
Bottom I-putty engezansi ayomile ngokuphelele, vele udlulise ingaphezulu, ungqimba olungaphezulu lumiswe kuqala, futhi ungqimba lwangaphakathi lusese kwinqubo yokumisa, okuholela emazingeni ehlukene okuncipha phakathi kwezendlalelo futhi okulula ukuqhekeka;
③ Lapho isendlalelo sesisekelo sicutshungulwa, uma izinto zokulungisa nokuthambisa zingomile ngokuphelele, kusetshenziswa udonga lwangaphakathi lwe-putty ngobulukhuni obuqinile, okulula ukudala ukuqhekeka;
④ Ukwakhiwa kukhulu kakhulu, ukoma kwangaphakathi kuhamba kancane, isivinini sokomisa ubuso siyashesha, futhi kulula ukudala ukuqhekeka.
Ngemuva kokuthi ukwakhiwa kwe-putty sekuqediwe, ingxenye noma konke kuzovela kuphuzi kungekudala.
Kwenzeka ikakhulukazi ezindongeni ezindala zasendlini. I-wall putty endala isebenzisa i-PVA glue eningi. Ingcina igugile futhi ibolile ukukhiqiza i-asidi engafakwanga insada. I-asidi engagcwalisiwe iphendula nge-calcium ions e-putty ukuze ikhiqize usawoti ophuzi we-calcium.
CoatingRoll enamathela kabili ngeglue engasebenzisi imvelo, bese ufaka i-putty yangaphakathi yodonga lwamanzi olusemanzini ngemuva kokuthi selome ngokuphelele;
OllRoll on two coats of white seal primer, bese ususa i-putty ngemuva kokuthi isomile ngokuphelele;
Sebenzisa ukunamathisela i-putty ekwakheni, noma usebenzise i-putty board ekwakheni.
Izindlela zobuchwepheshe zokunqoba ukuqhekeka kuphrojekthi yokufaka umoya oshisayo
ResistanceUkuphikiswa kokuqhekeka koqweqwe lokuvikela ukuqhekeka kungukuphikisana okuyinhloko, futhi kufanele kusetshenziswe udaka olukhethekile lokulwa nokuqhekeka futhi kufanele kutholakale inetha lokuqinisa elifanele,
Ukungeza inani elifanele le-polymer nefayibha odakeni kuyasebenza ekulawuleni imifantu.
YNgosimende loku-plasta futhi uthuthukise inetha lokuvikela ungqimba lokuvikela olwakhiwe ngohlelo lonke ludlala umphumela wokumelana nokuqhekeka okubucayi. I-deformation kufanele ibe nkulu kunomkhawulo wamacala amabi kakhulu, ukusonteka kosimende wokuqina oguqukayo (okomisiwe okwehlisayo, ukusonteka, ukushisa kwamapayipi, umswakama kanye nokusonteka kwamakhemikhali) nokuguqulwa okuyisisekelo kanye nongqimba oluvikelayo, ukuze kuqinisekiswe imfuneko yokuqhekeka ukumelana ufa ukumelana. I-compound kunethiwekhi ye-mortarreinforced (efana nokusetshenziswa kwendwangu ye-fiberglass mesh), ngakolunye uhlangothi ingakhuphula ngempumelelo ukuqina koqweqwe lokuvikela i-anti crack, ngakolunye uhlangothi, ingahlakaza ngempumelelo ingcindezi, ekuqaleni ingahle ibe nemifantu ebanzi (ufa) usakazeke waba nemifantu emincane eminingi (imifantu) ukwakha umphumela wokuqhekeka. Kubalulekile ukwakheka kwangaphambi kokumelana kwe-alkali kanye nendawo eboshwe ngendwangu yengilazi yefayibha, izinhlobo zezingilazi zezingilazi futhi inokubaluleka okucacile kokumelana kwesikhathi eside kwe-alikhali.
LayerUmhlobiso wezinto zokwakha ungagqabuki nje kuphela, kepha futhi uphefumula (umswakama) nangokuhlanganiswa kwesendlalelo sokuvikela, kungcono ukukhetha ukunwebeka kwangaphandle kodonga.
Olunye ungqimba lwe-Interface, ungqimba lwe-insulation, izinto zokubopha nokuqinisa nazo kufanele zinikezwe ngabakhiqizi abangochwepheshe ukwenza ngcono ukulandeleka kwezinkinga zekhwalithi.
Kungani amathayili agandayiwe aqhekeka?
Ngokuvamile, kunezizathu ezintathu zokuqhekeka kwamathayili: eyodwa ikhwalithi yamathayili uqobo; enye inkinga yokwakhiwa kwethayela, kanti okwesithathu ungqimba lesisekelo namandla angaphandle. Ngezansi sizokwethula izizathu ezithile ngokuningiliziwe:
Amanye amathayili anezinga eliphakeme lokumunca amanzi nokungaminyani okwanele, okwenza amathayili aqhekeke; Amathayili awashiswa ngesikhathi senqubo yokudubula, futhi ayaqhekeka lapho kuthuthwa, kugcinwa futhi kusetshenziswa. Ikhwalithi yethayela uqobo iyinkinga, futhi ukuthungwa okuqhekezayo kuvame ukufana nemesh, njengosayizi wezinwele ezinhle, isilinganiso semifantu siphakeme kakhulu, futhi kungahle kube nokuqhekeka okuningi kuthayela. Lesi simo ngokuvamile senzeka kwimikhiqizo esezingeni eliphansi.
①Kusetshenziswa usimende osezingeni eliphakeme: Usimende ojwayelekile ongu-425 usimende wasePortland uvame ukusetshenziselwa ukwakha ithayela. Isilinganiselo sokuhlangana kwesihlabathi sikasimende ngu-1: 3. Uma izinga likasimende liphakeme kakhulu, usimende uzongenisa amanzi amaningi lapho udaka lukasimende luqina. Ngalesi sikhathi, umswakama wethayela umunce ngokweqile, kulula ukuthi uqhekeke. Ngokuvamile, kubonakala njengokuqhekeka kwamathayili amaningi, futhi ukuqondiswa kokuqhekeka kokuqhekeka akujwayelekile.
IlesAmathayili we-ceramic abekwa emigqonyeni engenalutho edala ukuthi amathayili aqhekeke: imigqomo engenalutho nemigqomo engeyona eyomgodi, isamente losimende namathayili e-ceramic anama-coefficients wokunweba ahlukile, abangela ukuthi amathayili akhubazeke aqhekeze. Ngokuvamile, ukusatshalaliswa kwamathayili aqhekekile akujwayelekile, kanti imifantu nayo ayijwayelekile. Imifantu iqondile futhi inobude obuhlukile. Ukushaywa kuphansi, kugxiliwe futhi kunodaka.
OAkukho seams okusele kupheyiji, ukunwetshwa nokuncipha kwamathayili e-ceramic kanye nongqimba wesisekelo akuhambelani, futhi ukwanda nokushisa kwe-thermal kubangela ukuthi amathayili e-ceramic aqhekeke. Ngokuvamile, kunemifantu emakhoneni amathayili, imifantu emincane ebusweni, kanye nokuthungwa okufishane.
④ Amathayili e-ceramic aqhekeziwe ngemuva kokusika: Kuklanywa imifantu emnyama ngesikhathi senqubo yokusika. Ngemuva kwesikhathi, amathayili e-ceramic athinteka ukuncipha kasimende namandla angaphandle.
Isendlalelo sesisekelo namandla angaphandle
FormationUkuguqulwa kwensimbi nokuqhekeka Ngenxa yezinkinga zayo zokwakheka komhlaba, kuzokwenzeka izinga elithile lokuncipha, okuzokwenza udonga lukhubazeke futhi luqhekeke futhi kubangele nokuqhekeka kwethayela. Ngokujwayelekile kuboniswa njengokuqhekeka okuqhubekayo nokujwayelekile.
RUkuqhekeza amathayili abangelwe ukudlidliza kodonga okubangelwa ukuphihliza udonga
③Isondelene kakhulu nemithombo ethile yokushisa, futhi ithempelesha iyashintsha ngenxa yokupholisa nokushisa ngokweqile, futhi ukunwetshwa okushisayo nokuncipha kubangela ukuthi amathayili aqhekeke. Lesi senzakalo ngokuvamile senzeka emakhishini, emakamelweni okubilisa, njll.